RW Rooble oo ka hadlay khilaafka kala dhaxeeya Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo ka hadlay khilaafka kala dhaxeeya Farmaajo
Khilaafka labada mas'uulka ayaa laga dareemay qoraalladii ay isagu jawaabayeen, ee dhawaan ay soo saareen.
NAIROBI, Kenya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa beeniyay inuu khilaaf kala dhaxeeyo Farmaajo kadib markii labadaa xafiis maalmo kahor ay soo saareen qoraallo ay isagu jawaabayeen oo ku saleysan maamulka dalka
Isagoo jaaliyadda Soomaaliyeed kula hadlayay Nairobi, ayuu Rooble shaaciyay in isaga iyo Farmaajo ay heshiis yihiin, oo aaney jirin wararka warbaahinta iyo baraha bulshada lagu baahiyay, ee ku saabsan khilaafka.
Wuxuu xusay in isaga iyo Farmaajo ay ka dhaxeyso wadashaqeyn, islamarkaana ay garbo siman uga shaqeynayaan sidii dalka uga dhici lahayd doorashada si nabad ah ku dhacda.
"Dalkaan hadii aan heshiis la ahayn, horey uma soconayo, oo qar ayuu ka dhacayaa, waxaa naga go'an aniga iyo Madaxweynaha inaan gaarsiino doorasho xasiloon, oo loo dhan yahay," ayuu yiri Rooble.
Hadalkan Rooble ayaa ka muuqda inuu wax qarinayo, oo uusan doonaynin bulshadda inuu la wadaago waxa ka socda gudaha Villa Somalia, laakiin waxaa xogo xafiisyadooda laga helay sheegayaan in mudo ku dhaw bil aysan labada mas'uul kulmin, oo xiriirkooduna hooseeyo.
Farmaajo ayaa qoraalkii uu soo saarey maalin kahor booqashadii Wafdiga Kenya ku joojiyay shaqada Xukuumadda inay heshiisyo gudaha iyo dibadda saxiixdo, taasoo maalin kadib Xafiiska Rooble uga jawaabey si kulul, iyadoo qoraalka ku jireen erayo laga dhadhaqansan karay khilaafkooda.
Rooble wuxuu si cad u sheegay in xiligii xukunka Farmaajo uu dhamaadey, oo hadda awoodda iyo talada dalka ay ku jirto gacanta Xukuumadda, oo uu sheegay inay tahay hay'adda kaliya ee sharciyadda u haysata inay go'aanno gaarto ama heshiisyo gasho.